Imbali emfutshane yeNkcazo yeNyunyana yeNyunyana
Idilesi yeNyunyana yeNyunyana yintetho eqhutywa rhoqo nguMongameli wase-United States kwiseshoni edibeneyo ye- United States Congress . I-State yeNdibaniso yeManyano ayikho, nangona kunjalo, yakhululwa ngunyaka wokuqala wonyaka wokuqala we-ofisi kwi-ofisi. Kwidilesi, umongameli ngokuqhelekileyo uxela imeko jikelele yesizwe kwimimandla yezemigaqo- nkqubo yangaphakathi kunye neyelizwe langaphandle kwaye uchaza iqonga lakhe lomthetho kunye nezinto eziphambili kwilizwe.
Ukuhanjiswa kweNdawo yeNyunyana yeNyunyana iyazalisa iCandelo II, iSec. 3, yomgaqo-siseko wase-United States ofuna ukuba "uMongameli uya kunika iinkcukacha kwiCongress of the State of the Union kwaye acebise ukuba acinge ngamanyathelo njengoko aya kugweba okuyimfuneko kwaye aphumelele."
Ukususela ngoJanuwari 8, ngo-1790, xa uGeorge Washington eyilungiselela umyalezo wokuqala wonyaka kwiNgqungquthela, abaongameli "baninzi," besenza oko kanye kwizinto eziye zaziwa ngokuba yiNkokheli yeNyunyana yeNyunyana.
Intetho yabelwe noluntu kuphela ngamaphephandaba ukuya ngowe-1923 xa uMongameli uCalvin Coolidge umyalezo wonyaka wenziwa kwi-radio. UFranklin D. Roosevelt wasebenzisa igama elithi "State of the Union" ngo-1935, kwaye ngo-1947, umlandeli kaRosevelt uHarry S. Truman waba ngumongameli wokuqala ukuhambisa idilesi ye-televised.
Esikhundleni sokucacisa i-ajenda yakhe yokulawula yesizwe, njengokuba sele isetyenziswa namhlanje, iWashington isebenzisa loo Mbuso wokuqala kwiNkulumbano yeNyunyana ukuba igxininise ingcamango "yemanyano yelizwe" eyayisanda kudalwa.
Enyanisweni, ukuseka nokugcina imanyano yayiyinjongo ephambili ye-Washington yokuqala yolawulo.
Nangona uMgaqo-siseko ungacacisi ixesha, umhla, indawo, okanye i-adresi, umongameli sele ehambisa iNtetho yeNyunyana yeNyunyana ngasekupheleni kukaJanuwari, kungekudala emva kokuba iCongress idibene kwakhona.
Ukususela eWashington yokuqala idilesi kwiCongress, umhla, ubude, indlela yokuhanjiswa kunye nomxholo kuye kwahluka kakhulu kumongameli kumongameli.
UJefferson uyayifaka ekubhaliseni
Ukufumana inkqubo yonke yentetho kwiseshoni edibeneyo yeCongress encinci kakhulu "ebukumkani," uTjohn Jefferson wakhetha ukufeza umgaqo-siseko wakhe ngo-1801 ngokuthumela iinkcukacha zezinto eziphambili kwilizwe kwiimpawu ezahlukileyo, ezibhaliweyo kwiNdlu nakwi-Senate. Ukufumana ingxelo ebhaliweyo ingcamango enkulu, abaphumeleleyo bakaJefferson kwiNdlu ye-White House balandelelana kwaye bekuyiminyaka eyi-112 ngaphambi kokuba umongameli athethe kwakhona i-State ye-Adesi yeNyunyana.
UWilson wabeka iSithethe saManje
Ngethuba lokuphikisana ngelo xesha, uMongameli uTolrow Wilson waphinda wavuselela ukunikezelwa kokuthetha kweNkcazo yeNdibaniso yeNyunyana kwiiseshoni ezidibeneyo zeCongress ngo-1913.
Isiqulatho seNkcazo yeNyunyana yeNyunyana
Kwimihla yamhlanje, iNdibano yeNdibaniso yeNyunyana isebenza njengentetho phakathi komongameli kunye neCongress kwaye, ngokubonga kumabonwakude, ithuba lokuba umongameli akhuthaze i-ajenda yezopolitiko zeqela lakhe ngekamva. Ngexesha elide, idilesi iqulethe ingcaciso ebalulekileyo ngaphambili.
Ngowe-1823, uJames Monroe wachaza oko kwaziwa ngokuba yi-Monroe Doctrine, ebiza iintlanga ezinamandla zaseYurophu ukuba ziphelise umgangatho weenkoloni.
UAbraham Lincoln watshela isizwe esithi ufuna ukuphelisa ubukhoboka ngo-1862.
Ngo-1941, uFranklin D. Roosevelt uthetha "inkululeko emine."
Kwiinyanga ezine nje emva kokuhlasela kuka-9-11 kwamaphekula, uMongameli uGeorge W. W. Bush wabelane ngezicwangciso zakhe zokulwa neloyiko ngo-2002.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni umxholo wayo, oomongameli banethemba lokuba i-State ye-Adesi yeeNyunyana iya kuphulukisa amanxeba ezombusazwe adlulileyo, ukukhuthaza ubunye bipartisan kwiNgqungquthela kwaye izuze inkxaso ye-ajenda yakhe yomthetho evela kumabini omabili kunye nabantu baseMerika. Ukususela ngamaxesha ... oko kwenzeka ngokwenene.
Ukuthi 'Ukufuna' ngesiSpeyin
Iifayile zokuguqulela zokulinganisa: ii-Ounces, i-Tbsps. Tsps.
Ukugqithisa ngokubanzi Inkcazo kunye nemizekelo
Izilwanyana ezingcwele ze-Winter Solstice
I-Best and Worst Sylvester I-Stallone Movies
St Roch, uPatron Saint weenja